Nahazo mari-pankasitrahana Nobel ho an'ny literatiora i Nozista Tanzania Mahagaga
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Nahazo mari-pankasitrahana Nobel ho an'ny literatiora i Nozista Tanzania Mahagaga
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Kolontsaina • Zon'olombelona • Vaovao • People • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Mpandresy loka Nobel ary mpanoratra tantara lozisialy Abdulrasak Gurnah
Ilay mpanoratra tantara tanzania Abdulrasak Gurnah dia namoaka tantara 10 sy tantara fohy marobe, maro ireo manaraka ny ain'ny mpitsoa-ponenana rehefa miatrika ny fatiantoka sy ny trauma vokatry ny fanjanahana eropeana ny kaontinanta afrikanina, zavatra niainan'ny mpanoratra ny tenany. Izy no voatendry ho loka Nobel ho an'ny literatiora 2021.
Nandritra ny sesitany, Abdulrasak Gurnah dia nanomboka nanoratra ho toy ny mekanika fiatrehana ny trauma amin'ny tsy maintsy handao ny tanindrazany.
Nanjary feo lehibe momba ny traikefa sy ny tantaran'ny fanjanahana eoropeanina tany amin'ny kaontinanta Afrika izy.
Izy no loka afrikanina voalohany notendrena tamin'ny sokajy Nobel ho an'ny literatiora nandritra ny 20 taona.
Gurnah dia teraka tamin'ny 1948 tany Zanzibar. Tamin'ny fanafahana azy tamin'ny Fanjakana Britanika tamin'ny 1963, Zanzibar dia nanao fikomiana mahery vaika izay nanjary fanenjehana ireo vitsy an'isa Arabo. Mpikambana tamin'io foko nokendrena io i Gurnah ary voatery nialokaloka tany Angletera tamin'izy 18 taona. Nandritra ny sesitany no nanombohany nanoratra ho fomba iray hiatrehana ny fihenjanana amin'ny fandaozana ny tanindrazany.
Ny Minisitry ny raharaham-bahiny any Alemana, Heiko Maas, dia namoaka fanambarana tamin'ny 7 Oktobra 2021, momba ny fanapaha-kevitry ny Komity Nobel hanomezana ny loka Nobel ho an'ny literatiora an'i Abdulrazak Gurnah. Izao no voalaza ao amin'ny fanambarana:
“Miaraka amin'ny mpanoratra tanzaniana Abdulrazak Gurnah, dia tsy ny feo manan-danja amin'ny fanomezam-boninahitra taorian'ny fanjanahan-tany no nomem-boninahitra, fa izy koa no loka afrikanina voalohany tao amin'ity sokajy ity tao anatin'ny roapolo taona. Ao amin'ny boky nosoratany sy ny tantarany dia miresaka momba ny tantaran'ny fanjanahantany sy ny fiatraikany any Afrika i Gurnah, izay manohy manao izay hahatsapany ny tenany ankehitriny - anisan'izany ny anjara toeran'ny mpitondra fanjanahan-tany Alemanina. Miteny mazava tsara izy manohitra ny fitsarana an-tendrony sy ny fanavakavaham-bolon-koditra ary manintona ny saintsika ho amin'ilay dia an-tsitrapo tsy an-tsitrapo ataon'ireo izay mikomy amin'ny tontolo hafa.
“Te-hanolotra an'i Abdulrazak Gurnah aho ny arahaba indrindra noho ny fahazoana ny loka Nobel ho an'ny literatiora - ny valisoa azony dia mampiseho ny maha-ilaina ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fomba velona sy mivelatra amin'ny lova zanatany.”
The Biraon'ny fizahantany afrikanina (ATB) nanaiky ny zava-bitan'i Abdulrasak Gurnah, ary ny filohan'ny ATB Alain St.Ange dia nilaza izao:
“Izahay ao amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany dia miarahaba an'i Abdulrazak Gurnah, mpanoratra tantara tazantina, tamin'ny nahazoany ny loka Nobel momba ny literatiora 2021. Nampirehareha an'i Afrika izy. Nasehony tamin'ny zava-bitany fa afaka mamirapiratra i Afrika ary izao tontolo izao dia mila mamaha ny elatry ny Afrikana tsirairay fotsiny mba hamelana antsika hanidina. ”
Ny filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia nanery an'i Afrika hanoratra indray ny fitantarany ary tsy manadino fotoana iray hamerenan'ity antso ity, tamin'ny filazany fa ny USP manan-danja an'i Afrika azon'ny Afrikanina atao tsara.
Ny ATB dia manohy manery an'i Afrika hiray hina kokoa amin'ny maha iray azy eo am-panomanana ny famohana tanteraka ny indostrian'ny fizahantany.
Gurnah dia profesora emeritus amin'ny fianarana anglisy sy postcolonial ao amin'ny University of Kent.